एरिक्सनको स्थितिमा सुधार- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ३१, २०७८ द मिरर
लन्डन — सम्भवतः डेनमार्कका क्रिस्टियन एरिक्सनले फेरि फुटबल खेल्ने छैनन् । युरो २०२० को फिनल्यान्डविरुद्धको खेलमा उनलाई हृदयघात भएको रहेछ । टोटेनहनमा एरिक्सनसँग रहेका विशेषज्ञ कार्डियोलोजी प्रोफेसरले आइतबार हृदयघात पुष्टि हुनुअगाडि नै यो अनुमान गरेका थिए ।
मैदानमा अचेत भएर ढल्नुअघि खेलमा डेनमार्कका क्रिस्टियन एरिक्सन । तस्बिर : एपी
अझ उनी त एरिक्सनलाई भविष्यमा सक्दो नखेल्ने नै सुझाव दिन्छन् । समूह ‘डी’ अन्तर्गत कोपनहेगनमा शनिबार भएको खेलमा क्रममा २९ वर्षीय एरिक्सन सबैलाई स्तब्ध पार्दै अचेत भएर मैदानमै ढलेका थिए ।
उनलाई मैदानमै उपचार आवश्यक परेको थियो । त्यसपछि उनलाई अस्पताल लगियो । उनको स्वास्थ्य स्थिति आइतबार सुधारोन्मुख छ । त्यसअगाडि नै उनले आफ्ना साथीसँग कुरा गरेका थिए । उनले उसलाई खेल जारी राख्ने भनेका थिए । यता उपचारमा संलग्न डेनमार्कका चिकित्सक मोर्टेन बोसेनले एरिक्सनलाई हृदयघात नै भएको बताएका छन् । तर उनले किन यस्तो भयो भनेर भन्न सकेका छैनन् । यो खेल भने फिनल्यान्डको पक्षमा रह्यो ।
फिनल्यान्डले यो खेल एक गोलले जित्यो । इंग्लिस एफएका मुटुरोग विशेषज्ञ रहेका प्रोफेसर सञ्जय शर्मा मान्छन्, एरिक्सनको सामान्य जीवनमा समस्या हुने छैन तर कोही चिकित्सकले उनलाई फेरि फुटबल खेल्न सुझाव पनि दिने छैन । उनले पीए न्युस एजेन्सीलाई भनेका छन्, ‘पक्कै पनि एरिक्सनलाई केही खराब भएको छ । तर उनी भाग्यमानी रहे । प्रश्न हो, खासमा भएको के थियो र यस्तो किन भयो ? सन् २०१९ सम्म एरिक्सन जति पनि परीक्षणबाट गुज्रिए ती सबै ठीक थिए ।’
त्यसैले अहिले यस्तो स्थिति किन आयो, त्यो भन्न गाह्रो छ । खुसीको कुरा के छ भने एरिक्सन अहिले ठीक भएका छन् । सबथोक ठीक महसुस गरिरहेका छन् । त्यसैले भविष्यमा शारीरिक रूपमा समस्या नहुन सक्छ ।’ उनी थप परीक्षणबाट गुज्रिरहेका छन् । त्यसको सबै नतिजा आउन बाँकी छ । इन्टर मिलानका खेलाडी एरिक्सनबारे उनले थपे, ‘उनले भविष्यमा फुटबल खेल्ने छ वा छैनन् म अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ ।’
उनको स्वीकारोक्ति थियो, ‘तर खेलका क्रममा उनी मृत्युको निकै नजिक पुगे । केही सेकेन्डका लागि उनी प्रतिकूल स्थितिमा रहे । कोही चिकित्सकले उनलाई फेरि फुटबल खेल्न भन्ने छैन । उनी इंग्ल्यान्डमा छन् भने यस्तो स्थितिमा फुटबल खेल्न पाउने छैनन् । हामी यो तथ्यमा निकै कडा नीति लिन्छौं र यसमा अडिग रहन्छौं ।’ इंग्लिस यू–२१ का खेलाडी फाब्रिस मुम्बा सन् २०१२ मा यस्तै स्थितिबाट गुज्रिएका थिए । उनी बोल्टनका लागि खेलिरहेका थिए टोटेनहमविरुद्ध ।
आइतबार इंग्ल्यान्ड–क्रोएसियाबीचको खेलमा उनको स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको प्लेकार्ड बोक्दै समर्थक । तस्बिर : एपी
मुम्बाले पछि आफ्नो खेलजीवन फेरि सुरु गर्ने बताएका थिए, तर विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाहपछि संन्यास लिए । त्यतिबेला उनी २४ वर्षका मात्र थिए । त्यतिबेलाका मुम्बाका चिकित्सकमध्ये एक साम माहिडिनले बीबीसीलाई भनेका थिए, फुटबलको त्यस्तो मोडमा हृदयघात निकै घातक हुनसक्छ । उनको भनाइ थियो, ‘त्यस्तो स्थितिमा तत्काल उपचार भएन भने निकै गाह्रो हुनसक्छ ।’ एरिक्सनलाई वास्तवमै के भएको थियो, ठ्याक्कै त्यसबारे पूरा जानकारी बाहिर आएको छैन ।
केही दिनमा यसबारे पूरा जानकारी आउन सक्नेछ । यसले धेरै हदसम्म उत्तिकै फिट रहने खेलाडी कम उमेरमा हृदयघातबाट गुज्रिने गर्छन भनेर कम्तीमा केही जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ । तर डेनमार्कका यी खेलाडीले संन्यास लिने हो भने आफ्नो फुटबल खेलजीवनलाई लिएर उनलाई कुनै गुनासो पनि हुने छैन । अयाक्सबाट निस्केका यी खेलाडीले साढे ६ वर्ष टोटेनहममा बिताए । गत वर्ष उनी इन्टर पुगे । त्यहाँ उनले सिरी ‘ए’ उपाधि जिते ।
क्रिस्टियन एरिक्सन मैदानमै अचेत भएर ढलेका कारण ओझेलमा परेको खेलमा फिनल्यान्डले शनिबार राति डेनमार्कलाई १–० ले हरायो । एरिक्सनलाई हृदयघात भएपछि खेल दुई घण्टा बढी समय स्थगित गरिएको थियो । प्रमुख प्रतियोगितामा आफ्नो पहिलो खेल खेलिरहेको फिनल्यान्डले त्यसपछि इतिहास रच्दै डेनमार्कलाई हराएको थियो । एरिक्सन ४१ औं मिनेटमा मैदान ढल्नुअघि डेनमार्कले फिनल्यान्डमाथि दबाब बनाएको थियो । जोनास विन्डले २० यार्ड टाढाबाट गरेको प्रहार फिनल्यान्डका गोलरक्षक लुकास हराडेकीले बचाएर संकट टारेका थिए । त्यस्तै पिइरे इमिले होज्बजर्गको हेड प्रहार बाहिरिन पुग्यो ।
अहिलेसम्म कुनै विश्वकप पनि नखेलेको फिनल्यान्डबाट जोइल पोहजानपालोले ६० औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । जेरे उरोनेनको क्रसमा उनले गरेको हेड प्रहार डेनमार्कका गोलरक्षक कास्पर स्माइकलले बचाउने प्रयास गर्दागर्दै गोल भयो । डेनमार्कले गोल फर्काउने अवसर नपाएको होइन । ७४ औं मिनेटमा होज्बजर्गको पेनाल्टी प्रहार फिनिस गोलरक्षक हराडेकीले बचाएका थिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०८:१९
लक्षित समूहबाहेकलाई खोप
लगाउनुपर्नेले पाएनन्, अन्य समूहले चिनजान र भनसुनका आधारमा लगाए
जेष्ठ ३१, २०७८ सन्जु पौडेल, माधव अर्याल, मनोज पौडेल
लुम्बिनी/पाल्पा/कपिलवस्तु — लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा लक्षित समूहबाहेकलाई कोरोनाको खोप लगाएको पाइएको छ । पहुँचका आधारमा खोप लगाएपछि सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका छन् । यहाँका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य शाखाले लक्षित समूहका नाममा आफन्त, नातागोता र परिवारका सदस्यलाई खोप लगाएको पाइएको हो ।
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकामा चिनियाँ भेरोसेल खोप लगाइँदै । तस्बिर : मनोज/कान्तिपुर
रूपन्देहीका स्थानीय तहमा सरकारले उमेर समूह तोकेर पठाएको भेरोसेल खोप जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीबाट दुरुपयोग भएको पाइएको छ । लक्षित समूह र स्थानीय बासिन्दा यसको प्रभावकारिताबारे अनभिज्ञ हुँदा खोप दुरुपयोग गरिएको गुनासो छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका केही खोप केन्द्रमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गत जेठ २५ गते आफन्त बोलाएर साँझ ५ बजेपछि खोप लगाएको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताए । लक्षित समूह तोकेर आएको खोप परिवार, आफन्त र साथीभाइलाई लगाएपछि स्थानीय सरकारको विश्वास मानेर खोप पर्खिनु बेकार भएको उनले दुखेसो पोखे । ‘टोल विकास संस्थाका मानिस भन्दै ल्याएर लगाएको देखियो,’ उनले भने, ‘दुरुपयोग गर्ने भए किन उमेर समूह तोक्न पर्‍यो ।’ स्वास्थ्यकर्मीले समेत अन्य उमेर समूहका व्यक्तिलाई केही नबोली खोप लगाइदिएको उनले बताए ।
रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकामा खोपको दुरुपयोग गरिएको गुनासो छ । पालिकालाई खोप लुकाएर राखेको आरोप लागेको छ । पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले १६ भाइल खोप इन्चार्जले राखेको आरोप लगाए । स्वास्थ्य इन्चार्जले स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले राखेको आरोप लगाएका छन् । त्यसपछि बचेको खोप जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । उक्त पालिकाका खोप केन्द्रमा ६२ वर्षमुनिका नागरिकले खोप लगाएको एक स्वास्थ्यकर्मीले बताइन् । तोकिएको उमेर समूहका व्यक्ति नआएपछि एक संस्थाबाट आएका व्यक्तिले लगाएको बताइन् । उक्त गाउँपालिकामा बुटवलबाट गएरसमेत खोप लगाएको खोप कार्यक्रममा सहभागी एक स्थानीयले बताए । स्थानीयका अनुसार बुटवल, भैरहवा र तिलोत्तमा क्षेत्रका व्यक्तिले ओमसतिया, लुम्बिनी, मर्चवारीसम्म पुगेर खोप लगाएको पाइएको छ । ती केन्द्रमा उपस्थिति पातलो भएपछि चिनजानका मानिसले लगाएको स्थानीयको भनाइ छ ।
रूपन्देहीमा ६२ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकका लागि आएको १४ हजार ९८ खोप शतप्रतिशत प्रयोग भएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले बताए । ‘खोप निरन्तर आइरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक डोज लगाएर बसेका मानिस र अन्य उमेर समूहले पनि पाउने गरी पहल भइरहेको छ ।’ पाल्पाका स्थानीय तहले पनि भेरोसेल खोपमा जालझेल गरेका छन् । लगाउनुपर्नेले पाएनन् भने अन्य समूहले चिनजान र भनसुन गरेर लगाए । कतिपय स्थानीय तहले लक्षित उमेर समूहको मागअनुसार खोप निल गरेका छन् । खोप लगाएका केहीले तथ्यांक मिलाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकअनुसार निस्दी, पूर्वखोला, माथागढी र रिब्दीकोट गाउँपालिकाले लक्षित उमेर समूहकालाई मात्र लगाएर इमानदारी प्रस्तुत गरेका छन् । तर अन्य ६ स्थानीय तहमा भने खोपमा जालझेल देखिएको छ । रामपुर नगरपालिकाले लक्षित ५ सय ५२ रहे पनि ६ सय ३७ जनालाई लगाएको छ । उसले निस्दीबाट फिर्ता भएको खोपसमेत रामपुरमा लगाएको छ ।
बगनासकाली गाउँपालिकाले लक्षित ३ सय ३१ जना सबैलाई लगाएको तथ्यांक दिएको छ । तानसेनले १ हजार १ सय २ लक्षित भए पनि ९ सय ९६ जनालाई लगाएको छ । तिनाउमा ३ सय १ लक्षित सबैलाई लगाएको जनाएको छ । रैनादेवी छहराले ४ सय ७ मा ३ सय ७३ जनालाई लगाएको छ । रम्भाले ३ सय ९ मा २ सय ७० जनालाई लगाएको छ । तानसेनको लायन्स लाकौल आँखा अस्पतालमा खोप लगाउनेको भीड थेग्न नसकेर स्वास्थ्यकर्मी नै हिँड्नुपरेको थियो । तानसेन नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी शिरबहादुर रानाले अत्यधिक भीड बढेपछि ज्यान जोगाउनै मुस्किल पर्ने अवस्था आएर बचेको खोप लिएर हिँडेको बताए । जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छे, नगरपालिकाका कर्मचारी, छुटेका स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाएपछि थप भीड बढेको थियो । ‘केही खोप बचेको थियो,’ स्वास्थ्यकर्मी रानाले भने, ‘त्यो छुटेका स्वास्थ्यकर्मी र केही जनप्रतिनिधिले लगाएका हुन् ।’ उनका अनुसार पहिला लगाउन बाँकी रहेका कर्मचारीले पनि लगाएका थिए । त्यसपछि जनप्रतिनिधिले आफन्तलाई बोलाएर लगाउन थालेपछि थप भीड जम्मा भएको थियो ।
सरकारले चीनबाट अनुदानमा आएको भेरोसेल खोप जिल्लामा पठाएको हो । सोहीअनुसार खोप लगाइएको थियो । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार यसपटक ६२ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका लागि भेरोसेल खोप आएको हो । जिल्लाभर ४ हजार १ सय १० जना लक्षित थियो । तर यो लक्षित २०६८ सालको जनगणनाअनुसार हो । यसमा सयौं भाइल खोप बच्नुपर्छ । तर यसअघि खोप लगाउन नमान्नेहरू पनि यसपटक खोप खोज्दै केन्द्र पुगेका थिए । ‘यसपटक कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन आकर्षण बढेको देखियो,’ स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश पन्थीले भने, ‘यसअघि खोपमा ध्यान नदिएका र बिरामी परिन्छ भन्दै नलगाउनेहरूले पनि अहिले जसरी पनि लगाउन पाए हुन्थ्यो भन्दै भनसुन गरेको पाइयो ।’
दुई स्थानीय तहमा अनुसन्धान
कपिलवस्तुका दुई स्थानीय तहले लक्षित समूहभन्दा बाहिर गएर खोप लगाई दुरुपयोग गरेको गुनासो आएपछि स्वास्थ्य कार्यालयले छानबिन थालेको छ । जिल्लाको वाणगंगा नगरपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाले खोप लगाउँदा आफन्त, चिनेजानेका र नेता कार्यकर्ताको दबाबमा स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाएका थिए । वाणगंगा नगरपालिकाले पिपरा अस्पताल र मोतीपुर स्वास्थ्यचौकीबाट खोप लगाउने प्रबन्ध मिलाएको थियो । तर त्यहाँ ६२ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकभन्दा युवायुवती, ४० देखि ५० उमेर समूहकाको बाहुल्य थियो । त्यहाँ नेता, कार्यकर्ता र स्वास्थ्यकर्मीको मिलेमतोमा आफन्तलाई बोलाई खोप लगाइएको थियो ।
वाणगंगाका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले १ हजार २ सय १ डोज खोप उपलब्ध गराएको थियो । तर नगरपालिका ठूलो र लक्षित समूह धेरै भएको भन्दै थप खोप माग गरिएको थियो । त्यसपछि जिल्लाबाट ५ सय डोज खोप पठाइएको थियो । सबै डोज खोप लगाइयो । मायादेवी गाउँपालिकामा पनि लक्षित वर्गभन्दा ३० देखि ४५ वर्ष उमेर समूहकाले नै खोप लगाए । त्यहाँ पहुँचका आधारमा स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा अन्य उमेर समूहका नागरिकलाई खोप लगाइएको पाइएको छ । त्यहाँ त बुटवल, भैरहवाबाट पनि खोप लगाउन आएका थिए ।
स्वास्थ्य कार्यालयबाट मायादेवीले ७ सय ३४ डोज खोप पाएको थियो । यी दुई स्थानीय तहमा खोपको दुरुपयोग भएको गुनासोपछि स्वास्थ्य कार्यालयले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । ‘पत्राचार गरेर सोधपुछ गरेका छौं,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हेमराज पाण्डेले भने, ‘जवाफ आएको छैन ।’ खोप दुरुपयोग भएको पाइए कारबाही गरिने प्रजिअ चक्रपाणी पाण्डेले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०८:१६